Caafimaadkaaga u hormari » My BreastScreen
Caafimaadkaaga u hormari
Ballanso iskiriingareynta naaska
Waa maxay iskiriingareynta naasku?
Iskiriingareynta naasku (mammogram) waa sawirka raajada naaska. Iskiriingareynta naaska waxay heli kartaa kansaro aad u yar in la arko ama dareemo. Dumar badan ayaa ka samatabaxa kansarka maanta mahad waxaa leh hore u ogaanshaha iyo daaweynta wanaagsan.
Khatar miyaan ku jiraa?
1 hal 7 dii dumar ah Victoria waxaa ku dhici doona kansarka naaska noloshooda.
Dumarka badidooda qaba kansarka naaska ma laha taariikh qoyseed ka cudurka.
Da’da ayaa ah qodobka khatarta ah ee ugu weyn qaadida kansarka naaska.
Miyaan u baahanahay iskiriingareynta naaska?
Hore u ogaanshuhu wuxuu badbaadiyaa nafo
Da’daadu ma tahay 50-74?
Waa in lagu iskiriingareeyaa labadii sanno ee kasta.
40-meeyo ama 75 ma ka weyn tahay?
La hadal dhakhtarkaaga oo ogow haddii iskiriingareynta naasku sax kuu tahay.
40 ma ka yar tahay?
Iskiriingareynta naasku wax ku ool uma laha dumarka ka hooseeya 40 ka sanno.
wuxuu qaataa qiyaastii
uma baahna inuu
dhakhtarku ku soo gudbiyo
dumar raajadda yaqaan
waxaa laga helayaa rug caafimaad oo kuu dhow
Victoria oo dhan
Ahow qof ka warqada naaska
Barro muuqaalka caadiga ah iyo dareenka naasahaaga. Arag dhakhtarkaaga haddii aad ogaatid isbedelo aan caadi ahayn.
Weydii dhakhtarkaaga wax ku saabsan khatarta kansarka naaska iyo baahida iskiriingareynta.
Put your health first – Caafimaadkaaga u hormari
Information sheet – Warqada macluumaadka BreastScreen
Registration form – Foomka ka raali ahaanshaha & Diiwaangelinta
Oo ay maamulaan dumar, loona maamulo dumar
TTY 13 36 77 haddii aad dhib ka qabto haddalka ama maqalka
Ka ballanso breastscreen.org.au ama wac 13 20 50